डिप्रेसन किन हुन्छ, के हुन् लक्षण? (भिडिओ) :: Setopati
डिप्रेसन किन हुन्छ, के हुन् लक्षण? (भिडिओ) पुरुषलाई भन्दा महिलालाई डिप्रेसन हुने सम्भावना दोब्बर
डा. ऋचा अमात्य, मानसिक रोग विशेषज्ञ काठमाडौं, पुस ४
डाक्टर ऋचा अमात्य
डिप्रेसन भन्नाले मनमा निराशापन हुनु र निरशापनको भावनालाई बुझिन्छ। कहिलेकाहीँ मानिस सानो कुराले पनि यत्तिकै निराश हुन्छ।
कहिलकाहीँ रून मन लाग्छ। आफूले सोचेजस्तो परीक्षा नभएमा विद्यार्थीहरूमा निराशापन आउछ।आफूले भनेजस्तो भएन भने, काममा धेरै तनाव भयो भने, सम्बन्धमा समस्या आयो भने, अनि आर्थिक रूपमा समस्या पर्‍यो भने पनि मानिस निराश हुन्छ।
डिप्रेसन किन हुन्छ? डिप्रेसनका लक्षणहरू के-के हुन्? डिप्रेसनको उपचार कसरी गर्ने? पुरुषलाई भन्दा महिलालाई डिप्रेसन किन धेरै हुन्छ? लगायत विषयमा हामीले मेडिसिटी अस्पतालमा कार्यरत मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर ऋचा आमात्यसँग भिडिओ कुराकानी गरेका छौं।
यस कुराकानीका मुख्य अंशहरू यसप्रकार छन्।
- मनमा निराशापन हुनु। सानो कुरामा चिटचिटाहट हुनु। केही काममा जाँगर नहुनु। थकान हुनु। काममा ध्यान केन्द्रित नहुनु। निद्रा नलाग्नु यसका प्रमुख लक्षण हुन्।
- डिप्रेसन भएको व्यक्तिले आफ्नो भविष्य अन्धकार देख्छ जसले गर्दा उसलाई आत्महत्यासम्म सोच आउन सक्छ। विगतमा मैले गल्ती गरेँ भनेर धेरै पछुतो मान्छ। कसैलाई खानको रूचि हुँदैन भने कसैलाई धेरै खान मन लाग्छ।
- सर्वप्रथम त बिरामीले आफ्नो व्यवहारमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। परिवारका सदस्यहरूले ख्याल गर्नुपर्छ। उपचारका लागि चिकित्सककहाँ जानुपर्छ। अन्यत्र जाने होइन, मनोचिकित्सक या साइकायाट्रिस्टकहाँ जानुपर्छ।
- कतिपय अवस्थामा परामर्श मात्रै गरेर पनि उपचार गर्न सकिन्छ। तर डिप्रेसन कडा हुँदै गएको छ भने औषधि खानु पर्छ।
- जति चाँडो रोग थाहा पायो त्यति चाँडो नियन्त्रणमा ल्याउन सकिन्छ। ढिला भयो, औषधि सेवन नियमित भएन भने डिप्रेसनसँगै अरू समस्या निम्तिन सक्छ।
- यसको कुनै उमेर समूह भन्ने छैन। तर २० देखि ३५ वर्षसम्म बढी देखिन्छ।
- डिप्रेसन महिलाहरूमा पुरुषको तुलनामा बढी देखिन्छ। दुई गुणा बढी। विश्वभरि गरिएको तथ्यांकमा महिलालाई धेरै भार उठाउन पर्छ जसले गर्दा उनीहरू धेरै डिप्रेसनमा परेका हुन्छन्। कार्यालयको काम अनि घरमा पनि कामले गर्दा समेत उनीहरूलाई डिप्रेसन हुन्छ। अर्को, महिलाहरू बढी भावुक हुन्छन् भन्ने छ।
- कोरोना महामारीका कारण पनि अहिले यसका रोगी बढेका छन्। मान्छेहरू अलि बढी आएकै छन्। तर उनीहरूमा बढी सचेतना भएर पनि हुनसक्छ।
-मनोरोग भएमा कुनै अप्ठ्यारोनमानी मनोचिकित्सक र साइकायाट्रिस्टलाई भेट्नुपर्छ। किनकि हामी खुसी भयौं भने मात्रै पूर्ण रूपमा स्वस्थ हुन सक्छौं।
(मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर ऋचा आमात्य मेडिसिटी अस्पतालमा कार्यरत छिन्।)
प्रकाशित मिति: शनिबार, पुस ४, २०७७, ०१:२६:००
नर्भिकमा स्तन क्यान्सरको निःशुल्क ओपिडी हुने
क्रिस्टल डाइनोष्टिकले त्रिभुवन विमानस्थलबाट र्‍यापिड पिसिआर टेष्ट गर्न थाल्यो